Diyo post :: ‘ट्यापे मुन्द्रे’को कब्जामा धादिङका सरकारी भवन : सटर भाडा लगाएर रकम अशुली ! ‘ट्यापे मुन्द्रे’को कब्जामा धादिङका सरकारी भवन : सटर भाडा लगाएर रकम अशुली ! - Diyo post
‘ट्यापे मुन्द्रे’को कब्जामा धादिङका सरकारी भवन : सटर भाडा लगाएर रकम अशुली !
धादिङ, २१ साउन । धादिङ जिल्लाको सदरमुकाम धादिङबेशीमा सरकारी भवन वर्षौंदेखि ‘ट्यापे मुन्द्रे’ले कब्जा गरेर भाडामा लगाएको पाइएको छ ।
निलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर ३ स्थित क्याम्पस चोकमा रहेको दुई वटा सरकारी भवन जिल्लामा गुण्डागर्दीमा लागेका व्यक्तिहरुद्वारा सञ्चालित धादिङ समाज धादिङले कब्जा गरी भाडामा लगाएर रकम असुल्दै आएको पाइएको हो ।
दुई वटा भवन मध्ये एकमा सहकारी संस्थाले भोग चलन गर्दै आएको छ ।
धादिङ समाज धादिङ नामक संस्थाले विभिन्न कम्पनिलाई सटर भाडामा लगाएको छ । दियोपोस्टले फेला पारेको प्रमाणहरु अनुसार उक्त संस्थाले नमस्ते डिजिटल फोटो स्टुडियो, नीलकण्ठ फ्रेस जुस तथा लस्सि सेन्टर, कृष्ण किराना स्टोर र नीलकण्ठ महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले सापकोटा खाजा घरलाई सरकारी भवन वर्षौंदेखि भाडामा लगाउँदै आएको छ ।
‘हामीले धादिङ समाज धादिङलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ बुझाउँदै आएका थियौँ,’ नमस्ते डिजिटल फोटो स्टुडियोका सञ्चालक लालकाजी श्रेष्ठले भने,‘अहिले नगरपालिका र धादिङ समाज धादिङबीच विवाद भएपछि विवाद मिलाएर आउनुस् अनि भाडा तिरौँला भनेका छौँ ।’
सटर भाडामा लिएर भाडा तिरिरहेका व्यावसायीहरु भने दोहारो चापमा परेका छन् । ‘हामीले कसलाई भाडा तिर्ने भन्ने निक्र्यौल नै हुन सकेको छैन । हामीलाई दुवै तर्फबाट भाडा मागेका छन्,’ एक अर्का व्यावसायीले भने,‘हामी दुवैलाई भाडा दिनसक्दैनौँ ।’
२०४२ सालमा तत्कालिन रानी ऐश्वर्य राज्य लक्ष्मि शाहले महिला सिल्प विकास केन्द्र धादिङलाई ६ आना जग्गा सहित एक भवन हस्तान्तरण गरेकी थिइन् । तत्कालिन महिला सिल्प विकास केन्द्र जिल्ला विकास समितिको मातहत रहेको थियो । सरकारी स्वामित्वमा रहेको उक्त जग्गामा २०४९ मा दर्ता भएको धादिङ समाज धादिङले दर्ता भएको सालदेखि नै अवैधानिक रुपमा कब्जा गरेर आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्दै आएको छ ।
२०६७ साल अघि भने धादिङबेसीका स्थानिय बासिन्दाले उक्त भवनमा भोज भतेर लगायत चाडपर्वका कार्यक्रमहरुमा प्रयोग गर्दै आएका थिए । तर, धादिङ समाज धादिङ नामक संस्थाको गुण्डागर्दी बढेपछि स्थानिय जनतालाई समेत धम्काएर उक्त भवन संस्थाले कब्जा गरेको थियो ।
भवनमा रहेको तीन वटा सटरका व्यावसायीहरुले मासिक १५ हजारका दरले धादिङ समाज धादिङलाई बुझाउँदै आएका छन् । तर, उक्त संस्थाले भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएको अडिट रिपोर्टमा जम्मा एक लाख पचास हजार मात्रै भाडा आएको उल्लेख गरेको छ । स्रोतका अनुसार धादिङ समाज धादिङलाई बार्षिक रुपमा ५ लाख चालिस हजार भाडा बापत सटरबाट प्राप्त हुन्छ । ९ वर्षमा संस्थाले ४८ लाख ६० हजार भाडाबाटै उठाएपनि राज्यले यसबापत एक सुक्का पनि पाएको छैन ।
तत्कालिन जिल्ला विकास समिति मातहत रहको उक्त भवनलाई २०७३ साल भाद्र महिनाबाट भने निलकण्ठ नगरपालिका मातहत ल्याउने निर्णय भएको थियो । सोही निर्णय अनुसार निलकण्ठ नगरपालिकाले धादिङ समाज सहित त्यहाँ भाडामा बस्ने अन्य व्यापारीलाई २३ महिनाको भाडा बुझाउन पत्राचार गरेको देखिएको छ ।
यता केही महिनाअघि मात्रै धादिङ समाजले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएको अडिट रिपोर्टमा भाडा बापत रकम लिएको उल्लेख गरेको छ । उता नगरपालिकालाई भने समाजले २३ महिनादेखि भाडा नबुझाएको भन्दै पत्राचार गरेको देखिन्छ ।
भाडादर फरक फरक !
धादिङ समाज धादिङले प्रति सटर १५ हजारको दरले भाडा उठाउँदै आएको छ । यता निलकण्ठ नगरपालिकाले भने मासिक १० हजारको दरले भाडा दिनुपर्ने पत्र काटेको छ । २३ महिनाको भाडा निलकण्ठ नगरपालिकालाई उपलब्ध गराउनु पर्ने भन्दै काटिएको पत्रमा एक मुष्ट २ लाख ३० हजार बुझाउन प्रति व्यावासायीलाई पत्राचार गरेको छ । तीन व्यावसायीबाट करीब ७ देखि ८ लाख रुपैयाँ उठाउनु पर्नेछ ।
धादिङ समाजका सदस्य गुण्डागर्दीमा !
समाज सुधारका लागि वा समाजमा सकारात्मक कार्य गर्नका लागि भन्दै संघ वा संस्थाहरु दर्ता हुनेगर्छन् । तर, उक्त संस्थामा जिम्मेवार पदमा रहेका केही व्यक्ति भने आपराधिक कार्यमा समेत लागेको पाइएको छ । समाजका उपाध्यक्ष रहेका मनराज गोदार व्यक्ति हत्याको अभियोगमा सिआइबीद्वारा पक्राउ परी अदालत पेश भइ राजनीतिक दबावमा छुटेका व्यक्ति हुन् । अर्का सदस्य नारायण तामाङ पनि आपराधिक क्रियाकलापमा समलग्न रहेको स्रोतको दाबी छ ।
अर्का सदस्य नै रहेका श्याम कृष्ण भण्डारी गुण्डा नाइके राधाकृष्ण भण्डारी ‘राध’का सहोदर दाई हुन् ।
सरकारी भवन कब्जा गर्नेलाई जिविसको सहयोग ?
सरकारी भवन आफ्नो व्यापारिक प्रयोग गर्ने संस्थालाई सरकारले समेत आर्थिक सहयोग गरेका समेत भेटिएको छ । धादिङ समाज धादिङले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएको अडिट रिपोर्टमा जिल्ला समन्वय समितिबाट २९ हजार रुपैयाँ सहयोग गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
भवनबाट धादिङ समाज धादिङलाई हटाउन कार्यदल
तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्व प्रकाश सुवेदीको कार्यकालका क्रममा उक्त भवनमा अवैधानिक रुपमा धादिङ समाजले कब्जा गरेको ठहर गर्दै भवन खाली गर्न कार्यदल बनेको थियो । स्थानिय राजनीतिक दलका प्रतिनिधी, जिल्ला नापी कार्यालय, मालपोत कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रतिनिधीको संयुक्त कार्यदल बनेको थियो । भवनबाट उक्त संस्थालाई हटाउने माइन्युटमा नेपाली कांग्रेसले भने हस्ताक्षेर गरेको थिएन । उक्त संस्थामा कांग्रेस निकट व्यक्तिहरु समलग्न रहेपछि कांग्रेसले हस्ताक्षेर नगरेको बताइएको छ ।
विभिन्न ठाउँमा उजुरी !
यसैबीच सरकारी भवन अन्य व्यक्तिले गलत रुपमा भाडामा लगाएर सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको भन्दै जिल्ला स्थित विभिन्न निकायमा उजुरी परेको छ । उजुरीकर्ता केशव बहादुर अधिकारी अनुसार उनले प्रदेश नम्बर ३ को मुख्य मन्त्रीको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, निलकण्ठ नगरपालिका लगायत विभिन्न निकायमा उजुरी परेको छ ।
स्थानिय बासिन्दा भन्छन्,‘सरकारी सम्पतिमाथि ट्यापे मुन्द्रको गुण्डागर्दी भयो, सार्वजनिक हितमा लगाइयोस्’
धादिङ सदरमुकाम धादिङ बेसी बीच बजारका स्थानिय बासी सरकारी सम्पत्तिमा गुण्डागर्दी शैलीमा दोहन भएको भन्दै उक्त भवन सार्वजनिक हितमा लगाउनु पर्ने बताउँछन् ।
‘वर्षौं देखि यो भवनमा अवैध रुपमा केही समुहले कब्जा गरेर बसेका छन् । अझै पनि नेपालमा गुण्डागर्दी कायम छ,’ एक स्थानियले भने,‘यो सरकारी सम्पत्ति हो । सरकार भनेका जनताको हो । जनतको हितमा यो भवन प्रयोग हुनुपर्छ । व्यक्ति मोटाउने तरिकाबाट प्रयोग भइरहेको देख्दा निकै दुख लागेको छ ।’
के भन्छन् नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत ?
निलकण्ठ नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत जगन्नाथ पन्तले नगरपालिकाले भाडा उठाउन पत्राचार गर्दा समेत उक्त भवनमा रहेका व्यापारीहरुले अटेरी गरेको बताए । ‘हामीलाई हस्तान्तरण भएको छ । हामीले हाम्रोमा आएदेखिको भाडा तिर भनेर पत्राचार गरेका छौँ । यो विषयमा अख्तियारमा समेत उजुरी परेको रहेछ,’ पन्तले भने,‘उजुरी गरेको निकायले समेत हामीलाई राम्रो गरेको छ । हामी फलोअप गरिरहेका छौँ ।’
उनले आफू उक्त नगरपालिकामा पुगेपछि २ पटकसम्म चीठि लेखिसकेको समेत बताए । ‘मैले २ पटक चिठी लेखिसकेँ । मान्छे पठाएर पैसा तिर भनिरहेको छु ,’ उनले भने,‘तिरेनन् भने जफत गर्ने अधिकार हामीलाई छ ।’
नगरपालिकामै कार्यरत एक कर्मचारीले समेत उक्त भवनमा एउटा सटर भाडामा लिएर व्यापार गरेका छन् । नगरपालिकामा चालक रहेका रोसनराज गिरीले निलकण्ठ फ्रेस जुस तथा लस्सी सेन्टर सञ्चालन गरेका छन् । उनले समेत नगरपालिकालाई भाडा नतिरेको पाइएको छ । स्रोतका अनुसार धादिङ समाज धादिङका अध्यक्ष बाबुकृष्ण श्रेष्ठले आफूहरुलाई भाडा दिन दबाव दिएपछि उनले नगरपालिकालाई भाडा बुझाएका छैनन् ।
यता कार्यकारी अधिकृत पन्तले भने गिरीको तलब बाट भाडा कटाइएको जानकारी दिए ।
संस्था नविकरण गर्न निमित्त प्रमुख पशासकिय अधिकृतकै सिफारिस !
निकै विवादित बनेको धादिङ समाज धादिङलाई संस्था नविकरणका लागि भने निमित्त प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले नै सिफारिस दिएको देखिएको छ । संस्था नविकरणका लागि निमित्त प्रमुख प्रशासकिय अधिकृले २०७५ असार १३ गते सिफारिस गरेको भेटिएको छ । यद्धपी दियोपोस्टसँग प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत जगन्नाथ पन्तले आफूले यो विषयमा अनुसन्धान गर्ने बताए ।
धादिङ समाज धादिङका अध्यक्षले दिए समाचार लेख्नेलाई धम्की !
समाचारको विषयमा प्रतिक्रिया लिनका लागि धादिङ समाज धादिङका अध्यक्ष बाबुकृष्ण श्रेष्ठको मोबाइल नम्बर ९८५१०२२३४४ नम्बरमा दियोपोस्टले सम्पर्क गरेको थियो । टेलिफोन कुराकानीका क्रममा निकै आक्रोशित बनेका उनले समाचार लेख्ने पत्रकारको विषयमा आफूले बुझ्ने भन्दै धम्की दिए । ‘कसले भन्यो मैले पैसा लिएँ भनेर ? तपाईं को बोलेको ?’ समाचारको लागि प्रतिक्रिया दिनुस् भनेर प्रश्न गर्दा उनले धम्काउँदै भने,‘के डकुमेन्ट आएको छ मलाई दिनु पर्यो नी ?’
उनले उक्त भवन पुरानो भएको र आफूहरुले संरक्षण गरेको बताए ।
‘त्यो भवन धादिङ समाजको कब्जामा छ । ३९ सालबाट धादिङ समाज बसेको हो । त्यो केही पनि थिएन । संस्थालाई आर्थिक जुटाउनका लागि धादिङ समाजले भाडामा लगाएको हो,’ सरकारी भवन भाडामा लगाउन पाउहुन्छ भन्ने दियोपोस्टको प्रश्नमा उनले भने,‘तपाईं को हो र ? भाडामा लगाउन पाउने नपाउने भन्ने ? तिमी को हो ? तपाईंले भन्न खोजेको के हो ? तपाईं कहाँ हो ? तपाईंले राम्रोसँग बोल्नुस् तपाईंको विषयमा सबै आइसकेको छ । तपाईंले यो विषयमा किन चासो लिनु भयो । तपाईं कुन जिल्लाको ? आमने–सामने आउनुस् ।’